Maaha wax cadaalad ah, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Ciise wuxuu qaatay seef, waran iyo waran midna. Ma lahayn ciidan gadaashiisa ka dambeeya. Hubkiisa kaliya wuxuu ahaa afkiisa, waxa dhib ku dhacayna waa fariintiisa. Wuxuu dadka ka xanaaqay si ay u dilaan. Farriintiisa waxaa la dareemay kaliya ma aha inay khalad ahayd, laakiin waxay ahayd mid khatar ah. Waxay ahayd kala-qaybsanaan. Waxay ku hanjabtay inay carqaladeynayso nidaamkii bulshada ee Yahuudda. Laakiin waa maxay farriinta ay mas'uuliyiinta diinta uga xanaaqi karaan inay dilaan kii watay?
Fikrad ka careysiin karta mas'uuliyiinta diinta ayaa laga heli karaa Matayos 9:13: "Waxaan u imid inaan u yeedho dembilayaasha oo aan kuwa xaqa ah u yeedhin". Ciise war wanaagsan buu u qabay dembiilayaasha, laakiin qaar badan oo ka mid ah naftooda isku halleeya waxay arkeen in Ciise ku wacdiyo war xun. Ciise wuxuu ku casuumay dhilladii iyo cashuurqaadayaashii boqortooyadii Ilaah, oo raggii wanaagsanaana taas ma aysan jeclayn. Waa cadaalad darro, "waxay oran karaan. “Waxaan sameynay dadaal noocan oo kale ah si aan u fiicanaano, maxay ugu imaan karaan boqortooyada iyagoon wax dadaal ah sameyn? Haddii dambiilayaashu aysan ahayn inay bannaanka joogaan, cadaalad darro ma aha! »
Cadaalad ka badan
Taa bedelkeeda, Ilaah waa ka caddaalad badan yahay. Nimcadiisu way dhaafsiisan tahay wixii aan kasban lahayn. Ilaah waa deeqsi, nimco buu leeyahay, naxariis badan, naxariis buu leeyahay, inkasta oo aan u qalmin. Farriinta noocan oo kale ah waxay khalkhal gelisaa mas'uuliyiinta diinta iyo qofkasta oo dhaho inaad isku daydo intaa ka badan, waad heleysaa; hadaad si fiican wax u qabato, waxaad heli doontaa mushahar fiican. Mas'uuliyiinta diintu waxay jecel yihiin farriinta noocan oo kale ah maxaa yeelay waxay fududahay inay dadka ku dhiirrigeliso inay dadaal sameeyaan, inay wax sax sameeyaan, inay si caddaalad ah ugu noolaadaan. Laakiin Ciise wuxuu yidhi: sidaa ma ahan.
Haddaad naftaada qodday god aad u qoto dheer, haddii aad isku noqnoqotid marar badan, haddii aad dembiilaha ugu xun tahay, uma baahnid inaad ka shaqeyso jidkaaga bannaanka si aad u badbaado. Ilaah si fudud ayaa kuu cafiyaa aawadood Ciise aawadood. Uma baahnid inaad kasbato, Ilaahay ayaa taas sameeya. Kaliya waa inaad aamintaa. Waxa kaliya ee ay tahay inaad samayso waa Ilaah aamin, ereygiisa qaado, deyntaada malaayiin ayaa la cafiyey.
Dadka qaar waxay u arkaan farriinta noocan oo kale ah inay xun tahay. "Fiiri, waxaan isku dayay si aan uga baxo godka," waxaa laga yaabaa inay dhahaan, "anna waan dhowaa. Haddana waxaad ii sheegaysaa in si toos ah god looga soo tuuray iyagoon wax dadaal ah geysan? Taasi waa cadaalad darro! »
Maya, nimcadu ma "cadaalad ah", waa nimco, hadiyad aynaan istaahilin. Ilaah wuu noqon karaa deeqsinimo cidda uu doonayo inuu noqdo deeqsi, warka fiicana waxa weeye inuu siiya deeqsinimadiisa qof walba. Waa cadaalad ah in dareenka ay ku jirto qof walba, in kasta oo tani macnaheedu tahay inuu deyn ballaaran u dejiyey qaar ka yarna kuwa kale - isku diyaarinta qof kasta, in kastoo shuruudaha ay kala duwan yihiin.
Masaal ku saabsan caddaalad iyo xaqdarro
Masaalka shaqaalaha beerta canabka ah wuxuu ku yaal Matayos 20. Qaarkood waxay heleen si sax ah wixii ay ku heshiiyeen, qaar kalena waxay heleen intaa ka badan. Haddaba nimankii maalinta oo dhan shaqaynayey waxay yidhaahdeen: Tani waa caddaalad darro. Waxaan shaqeynay maalintii oo dhan mana cadaalad ah inaan bixino isla sidii kuwa aan shaqeynin wax yar » (aayadda 12). Laakiin nimankii shaqeeyey maalinta oo dhan ayaa helay wixii saxda ahaa ee ay ku heshiiyeen ka hor intaysan shaqo bilaabin (V. 4). Kaliya way ka gunuuneceen maxaa yeelay kuwa kale waxay heleen wax ka badan wixii saxda ahaa.
Muxuu sayidkii beerta canabka ahaa yidhi? Miyaanan awood u lahayn inaan waxa aan rabo ku sameeyo waxa aan doonayo? Miyaad u muuqataa mid laga xumaado sababtoo ah waxaan ahay qof naxariis badan? » (V. 15). Sayidkii beertii canabka ahayd wuxuu yidhi inuu iyaga siinayo mushahar maalinle ah oo caddaalad ku shaqeeya, oo uu sameeyo, haddana shaqaaluhu way ka cawdeen. Sabab? Sababta oo ah waxay isbarbar dhigaan dadka kale oo aan la jeclayn. Waxay lahaayeen rajo iyo rajo xumo ku jirta.
Laakiin sayidka beerta wuxuu middood ku yidhi, Anigu xumaan kuguma aan samayn, Haddii aad u maleynaysid in taasi aysan cadaalad ahayn, dhibaatada ayaa ku jirta rajadaada, maahan waxaad xaqiiqda heshay. Haddaanan intaas oo dhan bixin intaas ka dib, kuwii ku soo dhowaaday, waad ku qanci lahayd wixii aan ku siiyey. Dhibaatadu waa waxa aad ka filanayso, maahan waxaan sameeyay. Waxaad igu eedeeysaa inaan xumahay maxaa yeelay waxaan aad ugu fiicanahay qof kale » (aayadda 13-15).
Sideed uga hortagi lahayd arintaas? Maxaad u malayn laheyd haddii maamulahaagu siiyo saaxiibbadaada ugu cusub gunno laakiin uusan ahayn kuwii duugga ahaa, shaqaalaha daacadda ahaa? Ma fiicnaan laheyd niyadda, ma fiicnaan lahayd? Laakiin Ciise kama hadlayo korodhka mushaharka ee halkan - wuxuu ka hadlayaa boqortooyada Ilaah oo masaalkan ku leh (V. 1). Masaalku wuxuu ka tarjumayaa wax ka dhacay shaqada Ciise: Eebbe wuxuu badbaadiyay dadka aan sameynin dadaal gaar ah, oo maamulka diinta ayaa yiri: “Tani waa cadaalad darro. Maahan inaad si deeqsinimo leh u siiso iyaga. Waxaan sameynay dadaal laakiin si dhib yar ayey wax u qabteen. » Ciisena wuxuu ugu jawaabay: "Waxaan u bishaareeyaa dambiilayaasha, ee ma aha kuwa xaqa ah." Waxbaristiisa waxay ku hanjabtay inay wiiqi doonto ujeeddada caadiga ah ee wanaagga.
Maxay taasi innaga yeelaysaa?
Waxaa laga yaabaa inaan aaminsanaano ka dib markaan shaqeyno maalinta oo dhan oo aan qabno rarka iyo kuleylka maalinta, inaan u qalano abaalmarin wanaagsan. Ma yeelno. Macno malahan intaad ku jirtey kaniisadda ama imisaad allabaryo ayaad sameysay; taasi waxba ma ahan marka la barbar dhigo waxa Eebbe ina siiyo. Bawlos wuxuu ku dadaalay dadaalkeena dhammaanteen; wuxuu ku allabaryay in ka badan allabari injiilka ka aan fahamsanahay, laakiin wuxuu kulligood ku tiriyey inay khasaare u tahay Masiixa. Waxay ahayd waxba.
Waqtiga aan ku qaadnay kaniisadda maahan Ilaah. Shaqada aan qabanay waxba kama soo horjeedaan waxa uu qaban karo. Xitaa qaabka sare, sida masaal kale leeyahay, waxaan nahay addoommo aan waxtar lahayn (Luk. 17, 10). Ciise wuxuu iibsaday nolosheena oo dhan; Wuxuu leeyahay sheegasho cadaalad ah fikir kasta iyo fal kasta. Ma jirto jid aan isaga ugu siin karno wax intaas dhaafsiisan - xitaa haddii aan fulinno wax walba oo uu amro.
Xaqiiqdii waxaan nahay sida shaqaalaha oo shaqeeya saacad keliya oo qaatay mushahar maalin buuxda ah. Waxaan si kooban u bilownay oo lacag ayaa nalagu siiyay sida haddii aan dhab ahaan qabanay wax waxtar leh. Ma cadaaladbaa? Malaha waa inaanu su'aasha gabi ahaanba weydiin. Haddii xukunku annaga noo yahay, waa inaanan raadin fikrad labaad!
Waxaan u aragnaa nafteena sidii dad muddo dheer soo shaqeeyay oo dadaal badan? Ma waxaan u maleyneynay inaan kasbanay wax ka badan inta aan helno? Mise waxaan isu aragnaa inaan nahay dad helaya hadiyad aan istaahilin, inta aan shaqeyneynay? Taasi waa cunugga fikirka.